Akụkọ - Ndụmọdụ maka ịzụrụ ihe nkpuchi PM2.5
Atụmatụ maka ịzụta ihe nkpuchi PM2.5
Kedu otu esi ahọrọ masks PM2.5? Anwụrụ ọkụ jupụtara n'obodo ndị a nke ugbu a, ikuku ikuku na-echekwa echiche. Anyị na-atụle na ihe nkpuchi na-ezo aka na ihe nkpuchi echepụtara maka PM2.5, ebe a na-ejikarị ihe nkpuchi obodo eme ihe iji gbochie oyi. Ihe ha na nkọwapụta ha enweghị ihe ha chọrọ, mana n'eziokwu, ha enweghị mmetụta na PM2.5 na mgbochi ọrịa.
Aha China nke PM2.5 dị mma. Ọma urughuru na-ezo aka ahụ ya na Ẹkot aerodynamic dayameta nke na-erughị ma ọ bụ hà 2.5 microns na ihere ikuku. Ebe ọ bụ na ihe ahụ pere mpe, ihe nkpuchi dị ka ihe mkpuchi siri ike na-arụ ọrụ. N'ihe banyere ịzụta ihe nkpuchi PM2.5, nkọwa dị elu bụ nke ka mma, ọkwa nchedo ka mma, nke ka ukwuu iguzogide iku ume nkịtị, na nkasi obi ka njọ mgbe ị na-eyi ha. Ọ bụrụ na ị na-eyi ngwaahịa nke nkọwa a ruo ogologo oge, ọbụnadị hypoxia siri ike nwere ike ime.
Na mgbe ọdịdị nke nkpuchi PM2.5 anaghị adaba na ihu, ihe ndị dị ize ndụ dị na mbara igwe ga-abanye na akụkụ iku ume site na ebe ha na-adabaghị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịhọrọ nkpuchi na ihe nchacha kacha mma. Ọ nweghị ike ichebe ahụike gị. Yabụ ugbu a, ọtụtụ iwu na ụkpụrụ mba ofesi na-ekwupụta na ndị ọrụ kwesịrị ịnwale ihe masks kwesịrị ekwesị, iji hụ na ndị ọrụ na-ahọrọ oke ihe masks ma na-eyi ihe mkpuchi dịka usoro ziri ezi, yabụ a ga-ekewa ndị masks dị iche iche iji mesoo dị iche iche nke ndị mmadụ.
Na mgbakwunye, nkpuchi carbon na-arụ ọrụ na-ewu ewu ugbu a. Kinddị ihe nkpuchi a nwere ike igbochi isi ya n'ihi mgbakwunye nke carbon na-arụ ọrụ mgbe ị na-echebara arụmọrụ nke igbochi ájá. Mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa a, ị ga-ahụrịrị n'ụzọ doro anya arụmọrụ ya nke ịgbazite ájá, ọ bụghị naanị carbon na-arụ ọrụ ka ọ ghagburu.
A na-atụ aro ka ị na-eku ume iku ume PM2.5 na valvụ iku ume dị ka o kwere mee, iji belata oke ọkụ ọkụ na-akpata site na eyi iku ume ruo ogologo oge. N'otu oge, ọkụ ahụ ka mma.